Xiddigii England U Dhaliyey Goolka Oo Looga Yeedhay Nigeria - "Ma Tihid Ingiriis, Dalkaaga Kaalay" - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaXiddigii England U Dhaliyey Goolka Oo Looga Yeedhay Nigeria – “Ma Tihid Ingiriis, Dalkaaga Kaalay”
Xiddigii England U Dhaliyey Goolka Oo Looga Yeedhay Nigeria – “Ma Tihid Ingiriis, Dalkaaga Kaalay”
Eberechi Eze ayaa xalay u saftay xulka qaranka England ee ay da’doodu ka hoosayso 21 jirrada isaga oo u dhaliyey gool rikoodhe ahaa kulan ka tirsanaa kulamada Euro 2021 ee U21, waxaase goolkiisu uu noqday mid waxba kama jiraan ah iyadoo Ingiriisku ka hadhay tartankaas.
Laacibkan oo asal ahaan kasoo jeeda Nigeria, haysatana dhalashada Ingiriiska ayaa doortay in uu u ciyaaro xulka qaranka England, laakiin waxa illaa xalay soo gaadhayay farriimo is-daba joog ah oo loogu baaqayo in aanu mar dambe u ciyaarin Ingiriiska ee uu iska soo xaadiriyo waddankiisa rasmiga ah.
Eberechi Eze oo khadka dhexe uga ciyaara Crystal Palace, ayaa wacdaro ka dhigay labadii kulan ee Hungary iyo Slovenia, waxaanu soo jiitay indhaha shacabka Nigeria.
Inkasta oo uu 22 jirkani ku dhashay Magaalada London, haddana waxay uu asal ahaan kasoo jeedaa waddanka Nigeria oo ay waalidkii ka yimaaddeen.
Madaxweynaha xidhiidhka kubadda cagta Nigeria, Amaju Pinnick ayaa hore xidhiidh ula sameeyey da’yarkan, waxaanu isku dayay in uu ka dhaadhiciyo in aanu qayb ka noqon xulka qaranka England, si uu ugu ciyaari karo Nigeria.
Si kastaba, shacabka Nigeria ee ciyaaraha la socda, isla markaana isticmaala baraha bulshada ayaa qoraallo ugu diray Twitter-ka, iyagoo ka dalbaday in uu ka mid noqdo xulka Siuper Eagles oo usoo gudbay tartanka Qarmada Afrika ee 2022 iyagoon hal marna laga badin.
Mid ka mid ah farriimaha soo jiitay indhaha ee Eberechi Eze, ayaa ahayd: “Fadlan kaalay u ciyaar waddankaaga, adigu ma tihid Ingiriis.”
Taageere kale ayaa soo qaatay sawirka Jay-jay Okocha, waxaanu barbar-dhigay Eze oo uu u sheegay in uu noqon doono xiddig weyn oo tixgelin leh sida Okocha oo kale haddii uu u ciyaaro Nigeria.